Mpianatra mijanona ao an-trano Nanome torohevitra ny minisitra
Maro ny zavatra azo atao mandritr’izao fotoana tsy hisian’ny fampianarana any an-tsekoly izao, hoy ny minisitry ny fanabeazam-pirenena, Rijasoa Andriamanana Josoa. Isan’izany ny famakiam-boky toy ny tantara sy angano, ny lalao isan-karazany, fijerena fahitalavitra, fijerena sarimihetsika na horonan-tsary.
Tsara, hoy izy, raha hanitaran-tsaina ireny rehetra ireny, izany hoe, hifandinihana, ohatra, ny lesona azo tsoahana tao anatin’ilay horonantsary na sarimihetsika. Misy dingana 3 no atao, ny mpianatra lehibe dia efa mahafehy ny tenany fa ireo mbola zaza kosa no tsy maintsy ampian’ny Ray amandreniny hoy ny minisitra.Dingana voalohany ny hoe : anontaniana ilay/ireo zaza hoe momba ny inona na momba an’iza ilay zavatra hitany ; faharoa apetraka ny fanontaniana hoe inona no tena nahaliana sy nahafinaritra tao ; ary fahatelo farany anontaniana izy hoe inona ny zavatra tianao ovaina tao anatin’iny zavatra hita, na re na natao iny.Amin’izay sady miala voly no mianatra sy manita-tsaina ary miha mafy kokoa ny fifandraisan’ny mpianatra sy ny Ray amandreny.Mbola tsy voafaritra moa mazava aloha hatreto ny daty mety hiverenan’ny fampianarana indray.